Dowladda oo lagu eedeeyay in hubka ay dalka keento lagu iibiyo suuqyada Muqdisho | Baydhabo Online
Dowladda oo lagu eedeeyay in hubka ay dalka keento lagu iibiyo suuqyada Muqdisho
Diblumaasiyiin u dhashay dalalka reer Galbeed ay waxa ay dowladda Soomaaliya ku eedeeyeen in hubka ay keento dalka ee loogu talagalay in lagu la dagaalamo Xarakada Al-Shabaab in lagu iibiiyo Suuqyada waa weyn ee Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Diblumaasiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in hubka Qaramada Midoobey ay u fasaxday dowladda Soomaaliya ee loogu talagay in lagu qalabeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in lagu iibiyo Suuqyada magaalada Muqdisho ,islamarkaana hubkaasi si qaldan loo isticmaalay.
Diblumaasiyiinta oo ka gaabsaday in magacyadooda loo isticmaalo warbaahinta ayaa wakaalada wararka Reuters la wadaagay hubka lagu iibiyo Suuqyada, waxaana sawirro laga soo qaaday ay muujinaayeen qoryaha fududud oo lagu iibinaayo mid ka mid ah Suuqyada Muqdisho.
Warbixintaan cusub oo ay soo saareen Diblumaasiyiinta reer Galbeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in hubka loogu tala galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay leexsadaan Kooxo gaar ah kuwaa soo la sheegay in ay ka sii iibiyaan dad suuqley ah oo kunool Magaalada Muqdisho.
Tan iyo Markii dowladda Soomaaliya laga qafiifay cunaqabateynta hubka ayaa lagu sheegay warbixinta in ay Soomaaliya soo gaareen ku dhawaad 15,000 iyo 20,500 oo ah hub fudud.